Ninka dadka ku laayay Las Vegas "wuxuu doonayay in uu baxsado" - BBC News Somali
Ninka dadka ku laayay Las Vegas "wuxuu doonayay in uu baxsado"
Image caption Booliisku wuxuu sheegay in haweenayday ay Nevada kula noolayd Paddock
Ninkii hubeysnaa ee ka dambeeyay dhacdadii Axaddii ee Las Vegas waxaa u qorsheynayd in uu baxsado, waxaana suuragal ah in laga caawiyay dilka uu geystay, sida saraakiisha ay ka shakisan yihiin.
Stephen Paddock wuxuu ku jiray "nolo sir ah, taas oo ay suuragal tahay in abid aanan sibuuxda loo fahmin", Taliyaha ciidamada gobolka Joe Lombardo ayaa sidaa u sheegay saxaafadda.
Waxa Paddock ku kallifay in uu 58 qof dilo macadda, waana dhacdadii ugu xumayd, taariikhda casriga ee Mareykanka.
Booliska ayaa qolka 32-aad ee hoteelka ka helay 64-sano jirka oo mayd ah, ka dib markii uu rasaas ku furay dadkii ku sugnaa bandhig faneedka.
Waxaa loo malaynayaa in uu isku dhuftay xabad, intii booliska ay furayeen hoteelka. Wuxuu ahaan jiray xisaabiye.
Saaxiibaddii maxay ka tiri weerarka?
Haweenaydii ay saaxiibbaha ahaayeen ninkii 58 ruux ku dilay magaalada Las Vegas Axaddii ayaa sheegtay in aysan waxba ka ogayn wixii uu qorshaynayay saaxiibkeedii "naxariista badnaa, dacabsanaa, ee haddana afka gaabnaa.
Marilou Danley hadalkeedu wuxuu ku soo aaday saacado ka hor markii ay booliisku tilmaameen in Stephen Paddock uu ku noolaa "nolol dahsoon".
Taliyaha booliiska deegaanka Joseph Lombardo ayaa shir jaraaid oo uu Arbacadii qabtay ka sheegay waxyaabahan:
Booliisku waxay heleen waxyaabo qarxa oo dheeri ah oo laga helay gaarigiisa oo yaalay huteelka uu daganaa, waxaana intaas weheliyay 1,600 oo rasaas ah.
Stephen ayaa khamaar ciyaarayay saacado ka hor markii uu toogashada billaabay.
Toddobaad ka horna wuxuu sariir ka sii qabsaday huteelka Ogden oo isna dusha ka soo fiirinaya barxaddii uu weerarka ku qaaday.
Laakiin taliyaha booliisku wuxuu intaas ku daray in aan ilaa iyo hadda war laga haynin waxa ku qaaday iyo in ay jirto cid arrintaas gacan ka siisay, waaxda dambi baarista Maraykanka ee FBI waxay sheegtay in ilaa iyo hadda aysan helin wax raad ah oo muujinaya in uu argagixiso caalami ah xiriir la lahaa.
Sawirro Sawirrada weerarka Las Vegas